Biko Nwalee Leaddị Ọdịdị Na-eduga Gị | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 20, 2015 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
A afọ ole na ole anyị na-arụ ọrụ na ndị ahịa onye nyekwara a dị mkpa mmefu ego na a mbọn gị n'ụlọnga na-ewu a mara mma ọhụrụ web edidu. Onye ahịa ahụ bịakwutere anyị n'ihi na ha anaghị ahụ ọhụụ ọ bụla na-abịa site na saịtị ahụ wee gwa anyị ka anyị nyere ha aka. Anyị mere ihe mbụ anyị na - ejikarị eme, rịọ arịrịọ site na ibe ịkpọtụrụ ha wee chere nzaghachi. Onweghi onye biara.
Anyị kpọtụụrụ ha ma jụọ ebe fọm ịkpọtụrụ ahụ gara. Ọ dịghị onye maara.
Anyị banyere na saịtị ahụ ka anyị wee hụ n’onwe anyị ebe ụdị a na-etinye na ya ma maa jijiji ịchọpụta na ha edozighi ebe ọ bụla. Peeji nke kọntaktị mara mma (na ibe ibe ọdịda ndị ọzọ) bụ ụdị mpempe akwụkwọ na-aza site na weebụ yana nkwenye mana ezigaghị ma ọ bụ chekwaa ntinye ọ bụla. Yikes.
N'afọ a, anyị were onye ahịa nke chụrụ ụlọ ọrụ azụmaahịa ha gara aga maka otu okwu ahụ. Ha biri ndụ ma ghara inwe isi ruo ọnwa atọ. Ọnwa ATỌ. Ọ bụrụ na ebumnuche ahịa gị bụ inweta ndu ma ọ bụ ire n'ịntanetị, kedu ka ị si eme n'ụwa ka ị ga-aga ọnwa atọ n'achọghị na ọ nweghị ndu na-abịa. Ọ bụrụ na ha enyeghị anyị ohere inweta mkpesa ahụ, anyị na-ajụ nzukọ ọ bụla otu ụzọ ndụ ọgbọ si aga.
Ọ bụrụ na ị naghị azaghachi oge na arịrịọ weebụ gị, nke a bụ ụfọdụ ihe mkpali:
Have nwere oge 100 ohere nke ịkpọtụrụ onye ndu ma ọ bụrụ na ị zaghachi n'ime nkeji 5 na 30 nkeji mgbe nrubeisi.
I nwere 21 ugboro ohere nke iru eru isi ma ọ bụrụ na ị na-aza n'ime 5 nkeji vesos 30 nkeji mgbe nrubeisi.
Anyị na-anwale ndị ahịa anyị site na iji aha ọzọ na adreesị ozi-e, na-edozi arịrịọ site na saịtị ha iji hụ ogologo oge nzaghachi ahụ were. Ọtụtụ mgbe, ọ bụ ụbọchị 1 ma ọ bụ 2. Ma nyochaa ndị stats si InsideSales.com N'elu… oburu na i zaghi ma onye osompi gi azaa ya, kedu onye i chere natara ahia a?
Anyị na onye ahịa e-commerce na-arụ ọrụ ebe anyị rịọrọ site na saịtị ahụ. N'ime awa ole na ole anyị natara nzaghachi nye ajụjụ anyị banyere ngwaahịa ha. Ha zaghachiri na otu ahịrịokwu, enweghị nhazi onwe, enweghị ekele, na - nke kachasị njọ - enweghị njikọ maka ozi ndị ọzọ ma ọ bụ ibe ngwaahịa nke onye ọbịa ahụ nwere ike ịgbaso ma zụta ya.
Ọ bụrụ na ị na-anata arịrịọ site na email ma ọ bụ mpempe akwụkwọ na ụlọ ọrụ gị, ị na-ele anya iji hụ ma onye ahụ ọ bụ onye na-azụ ahịa ogologo oge ma ọ bụ atụmanya ọhụụ? Nwere ike ịkụziri ha nke ọma n'okwu ahụ? Nwere ike ịgwa ha ndụmọdụ na ọdịnaya ọzọ iji lelee? Ma ọ bụ - ọbụna ka mma - ị nwere ike weta ha ozugbo n'ime usoro ahịa? Ọ bụrụ na ha hapụrụ nọmba ekwentị, gịnị ma ị kpọọ ha ma lee ma ị ga-emechi ire ere na ekwentị? Ma ọ bụ ọ bụrụ na site email, ị nwere ike ịnye ha ego na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha nwere ike inwe mmasị na ya?
Ndị a abụghị ndu oyi, ha na-acha ọkụ ọkụ na-ewe oge iji wepụta ozi nkeonwe ha ma jụọ gị maka enyemaka. Ikwesiri ima elu na ohere ndi a iji nyere ha aka ma mee onwe gi onye mmeri!
Akpaghị aka Ule
Otu n’ime ngwa n ’ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ igwe eji arụ ọrụ ugbua bụ ebe enwere selenium. Site na teknụzụ ha, ị nwere ike dee nnyefe akwụkwọ ntanetị. Nke a bụ ihe ịchọrọ iji oge na mbọ tinye, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-agbanwe saịtị na teknụzụ. Being na-adọ aka ná ntị mgbe e nweghị omume na kọntaktị na peeji nke ma ọ bụ na-eduga ụdị nrubeisi n'ime 5 nkeji nwere ike ịbụ a atụmatụ ị chọrọ idokwa mee elu mee kama!
Tags: formsinbound na-edugainbound marketingedu ọgbọụdị ndu ọdoedu nzaghachiOge nzaghachiụdị dị n'ịntanetị